6 Kuchengetedza Tips Kana Train Kuenda In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 6 Kuchengetedza Tips Kana Train Kuenda In Europe
Pane imwe nguva, kana bhajeti haana nezvaanoita pakusarudza dzokugara (kana kanenge, kwete mikuru basa!) Zvinhu zvakanga nyore; mazuva ano, kana tichida kufamba, tinofanira kuva vakachenjera vane nzira tikashandisa bhajeti yedu. Kunyange zvazvo chitima vaifamba mu Europe ndiyo bhajeti-ushamwari chingaitwa wose kutsvaka kuona kunakidza (uye vakazorora!) nzira kufamba, ipapo vanogona kungova chikwama-matambudziko ezvinhu uchida kure.
saka, kukubatsira kuwana kupfuura kubva pakufamba kwenyu, Takaisa pamwe mazita chii tinonzwa tiri pamusoro mari rokuponesa mazano kuti nechitima hwokufambira muEurope.
Regai Travel pana Peak Holiday Times
Ehe, Uyu anofanira kuenda pasina vachiti, asi hapana chakaipa nezvokubudirira payo kamwe zvakare. Kana totaura Kudzidzisa vatariri mu Europe, mazororo uchida kure vari zvikurukuru Christmas, Goredzva, uye Easter uyewo mwedzi August. For chikonzero, ari mitengo vachiwedzera mumwedzi izvi, saka ... kushanda vakavapoteredza zvishoma.
Kunyange ichimuudza murege kuongorora dzimwe Europe uchida kuona ane mhando kunaka uye kure Hadzisi, tiri kuzviita nokuda kwenyu. Train parwendo mu Europe, uchaona kuti zvose kumadokero kuguma kupfuura nzira anodhura pane rokumabvazuva misa. saka, kusvikira chikwama chako richikora, achatungamirira East uye kuongorora nerunako rwuno Europe!
CHERECHEDZA: Kana muEastern Europe, nechokwadi iwe kumisa ne Prague (Czech Republic), Budapest (Hangari), muBelgrade (Sebhiya), muBucharest (Romaniya), Zagreb uye Split (Kiroshiya), Sarajevo (Bhoziniya neHezegovhina) uye Moscow (Rashiya).
Dzivisa 1st Class Apo Train Kufamba Europe
tsime, pachena! Still, regai kuva mumwe wevaya vafambi uyo "netsaona" gara mukirasi 1st. Sei? Nekuti iwe achaguma kubhadhara wakaisvonaka zvinodhura chaizvo kana vanobatwa iro mari iwe kupfuura 1st kirasi tikiti pachayo!
Book Afternoon Anorovedza kana Train Kufamba Europe pakati munyika
Evening nezvitima, aka usiku nezvitima ndivo kupfuura mutengo-inobudirira chingaitwa European vafambi. Kwete chete here kunze pamutengo pamubhedha asi imi vo kuwana kusangana Europe mumaonero yose itsva.
tsime, kwete chaizvoizvo kupikiniki asi "Zvarevashe" zvokudya pamba, saka haufaniri kutenga zvokudya zvinodhura mundege. Muchaponesa uwane kana iwe Stock pamusoro inobata panguva Supermarket!
Dzivisa Kutenga Advanced Tickets pamusoro Shorter Panzendo mukati Mainland Europe
Kana chitima vaifamba mu Europe, kutarisira nzendo pfupi kuti pricier pane refu ndivo; vachiri, pane kubatsira vasina kuti bhuku pachine iyo anoita kuwedzera mukana wokushandiswa rwendo wako kuchengetedza kwayo. Kana uri parwendo munzvimbo yakaoma Europe unogona kutenga tikiti pachiteshi asati achikwira chitima.
Save-A-Rovedzai ndiyo nzira yakanakisisa bhuku tarenda dzakasiyana panguva zvakachipa prices uye vanakidzwe chitima wako kufamba mu Europe ine chidimbu pfungwa.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
europeantravel europetravel mazano Train Travel traveltips
Car Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Greece, Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe, Kufamba Iceland